I-Tic Tac Toe 🥇 Dlala ku-inthanethi mahhala ku-mulator.online
I-Tic Tac Toe Ngubani ongakaze adlale i-tic-tac-toe? Lokhu kungenye yezinto zokuzilibazisa ezithandwa kakhulu futhi ezijabulisayo okufanele uzikhumbule. Ngaphandle kokulula nokushesha, lo mdlalo usiza ukuthuthukisa kakhulu ikhono lakho lokuqonda.
I-Tic Tac Toe: ungadlala kanjani igxathu negxathu? 🙂
Ukudlala Blackjack online mahhala, nje landela le miyalo yesinyathelo ngesinyathelo :
Isinyathelo 2 . Ngokushesha nje lapho ufaka iwebhusayithi, umdlalo uzovele uboniswe esikrinini. Kumele uchofoze nje Play futhi ungaqala ukudlala, khetha ukudlala ngokumelene nomshini noma dlala nomngani. Futhi ungakhetha inani lezikwele ibhodi okufanele libe nalo.
Isinyathelo 4. Thola amathayela akho amathathu ukuhlangana ngokuma phezulu, ngokuvundlile, noma ngokulandelana.
Kunamasayithi amaningana awenzayo I-Tic Tac Toe itholakala mahhala. Ungadlala ngerobhothi noma ngomuntu. Ngisho neGoogle iyenza itholakale. Ngamafuphi, udinga nje ukusesha i- "tic-tac-toe" emsamo.
Ngaphezu kwakho konke, lo mdlalo ulungele noma ngubani oneminyaka yobudala emihlanu.
Yini iTic Tac Toe? 🤓
I-Tic Tac Toe ngumdlalo olula ngokweqile wemithetho, ongalethi ubunzima obukhulu kubadlali bawo futhi ofundeka kalula. Imvelaphi ayaziwa, nezinkomba zokuthi kungenzeka yaqala eGibhithe lasendulo, lapho kwatholakala khona amathreyi aqoshwe edwaleni, ayeneminyaka engaphezu kwengu-3,500 XNUMX ubudala.
Into yalo mdlalo ukubeka ama-O noma ama-X amathathu kulayini oqondile.
Umlando weTic Tac Toe 😄
Umdlalo waduma ku England ku Ikhulu le-19th , lapho abesifazane behlangene ntambama bezoxoxa futhi bafekethise. Kodwa-ke, abadala, ngoba babengasakwazi ukufekethisa ngenxa yamehlo abo abuthaka, bathokoziswa ngumdlalo owaqanjwa kabusha Ama-Noughts neziphambano .
Kepha umsuka womdlalo mdala kakhulu. Ukuvubukulwa kwe UKurna ithempeli eGibhithe ithole izinkomba ezikulo kusukela ngomhlaka 14 ngekhulu leminyaka BC . Kodwa okunye okutholwe yimivubukulo kubonisa ukuthi iTic Tac Toe nezinye izinto eziningi zokuzilibazisa ezifanayo zakhiwa ngokuzimela ezindaweni ezihluke kakhulu zeplanethi : zazidlalwa naseChina yasendulo, iMelika yangaphambi kweColumbian kanye noMbuso WaseRoma, phakathi kwabanye.
Ngo 1952, the I-EDSAC umdlalo wekhompyutha OXO yasungulwa, lapho umdlali aphonsela inselelo ikhompyutha kumidlalo yeTic Tac Toe. Ngakho-ke kwavela omunye wemidlalo yokuqala yevidiyo okukhona kuyo izindaba.
Imithetho yeTic Tac Toe 📏
Ibhodi liyi- irowu ezintathu ngamakholomu amathathu Matrix .
Abadlali ababili bakhetha umaki owodwa ngamunye, imvamisa a indingilizi (O) nesiphambano (X).
Abadlali badlala ngokushintshana, ukuhamba ngakunye ngakunye , esikhaleni esingenalutho ebhodini.
Injongo uku thola imibuthano emithathu noma iziphambano ezintathu zilandelana , kungaba ngokuvundlile, ngokuvundla noma ngokuvundlile, futhi ngasikhathi sinye, noma nini lapho kungenzeka khona, vimbela umphikisi ekuwineni ekuhambeni okulandelayo.
Lapho umdlali ezuza inhloso, zonke izimpawu ezintathu zivame ukweqiwa.
Uma bobabili abadlali behlala bedlala ngokusemandleni abo, umdlalo uzohlala uphela ngokulingana.
Umqondo womdlalo ulula kakhulu, ngakho-ke akunzima ukuthola noma ngekhanda wonke amathuba okuhamba kahle, yize inani eliphelele lamathuba likhulu kakhulu, iningi lilinganiselwe futhi nemithetho ilula.
Ngalesi sizathu, kuvame kakhulu ukuthi umdlalo ube ngumdwebo (noma "uguge").
winner : Uma unezicucu ezimbili zilandelana, beka eyesithathu.
Block : Uma umphikisi enezicucu ezimbili zilandelana, beka eyesithathu ukumvimba.
triangle - Dala ithuba lapho ungawina ngezindlela ezimbili.
Vimba unxantathu ophikisayo
Centre : Dlala enkabeni.
Ikhona elingenalutho - Dlala ekhoneni elingenalutho.
Amathiphu wokuthi unganqoba kanjani
Ukuze usebenzise ukucabanga okunengqondo, le ndlela yokuzilibazisa inamaqhinga athile asizayo lapho ushiya.
1 - Beka esinye sezimpawu ekhoneni lebhodi
Ake sithi omunye wabadlali ubeke u-X ekhoneni. Lelisu lisiza ukunxenxa ophikisayo ukuthi enze iphutha, ngoba uma ebeka u-O esikhungweni maphakathi noma ohlangothini lwebhodi, kungenzeka alahlekelwe.
2 - Vimba umphikisi
Kodwa-ke, uma umphikisi ebeka i-O maphakathi, kufanele uzame ukubeka i-X kulayini onendawo engenalutho kuphela phakathi kwezimpawu zayo. Ngakho-ke, uzobe uvimba umphikisi futhi udale amathuba amaningi wokunqoba kwakho.
3- Khulisa amathuba akho wokunqoba
Ukukhulisa amathuba akho wokuwina, kuhlale kungumqondo omuhle ukubeka uphawu lwakho kolayini abahlukahlukene. Uma ubeka ama-Xs amabili elandelana, umphikisi wakho uzokubona futhi akuvimbe. Kepha uma usakaza i-X yakho kweminye imigqa, wandisa amathuba akho wokuwina.
Ungayenza kanjani i-Tic Tac Toe yomuntu?
Khetha indawo evulekile, eyisicaba ongayidlala. Okulandelayo, hambisa ama-hula hoops emigqeni emithathu nasemigqeni emithathu, njengebhodi lomdlalo we-tic-tac-toe. Ungashiyi isikhala esiningi phakathi kwama-hula hoops.
Uma udlala ngaphakathi ngendlu eqinile, sebenzisa itheyiphu ukwenza ibhodi . Kukhonkolo, ungadweba futhi imigqa ngoshoki.
Ukuze kungabikho muntu olimalayo phakathi nomdlalo, bheka inhlabathi yezimbobo, imfucumfucu eyingozi (efana nengilazi ephukile), noma olunye uhlobo lwengozi, njengezimpande namatshe.
Zama ukusetha amabhodi angaphezu kwelilodwa uma unenani elikhulu labadlali. Ngokufanelekile, iqembu ngalinye kufanele libe nomhlanganyeli ophakathi koyedwa nabathathu.
Umdlalo womuntu we-tic-tac-toe ungadlalwa ngawodwana noma ngamaqembu. Esehlakalweni sesibili, iqembu ngalinye kufanele libe namalungu angaphezu kwamathathu. Ibhodi ngalinye kufanele libe namaqembu amabili ancintisanayo, elilodwa ohlangothini ngalunye.
Ungavumela ngisho amaqembu anabadlali abangaphezu kwabathathu, kepha lokhu kuzowubambezela umdlalo futhi kungagcina kubabhidlizile abadlali abasebancane.
Khetha iqembu elizoliqala
Khetha ukuthi ngubani ozohamba kuqala ngemali noma uhlamvu lwemali. Okunye ongakwenza ukucela iqembu ngalinye ukuthi likhethe umholi elizomthatha, ozoqala ngedwala, ngephepha nangesikele. Iqembu lokuqala elizodlala lizothola i-X, kanti iqembu lesibili lizothola i-O.
Ukwenza umdlalo uxakeke kakhulu, cela abadlali ukuthi bancintisane ohambweni lokuya nokubuya bathathe isinyathelo sokuqala sabawinile.
Qhubeka nokudlala kuze kube iqembu elilodwa lingagcwalisa izikwele ezintathu zilandelana. Nikeza izikhwama ezine zendwangu eqenjini ngalinye. Sebenzisa izikhwama ezinemibala ehlukene ukwehlukanisa u-X no-O. Iqembu ngalinye kumele libeke isikhwama esisodwa ebhodini ngasikhathi sinye kuze kube yilapho elinye lizowina noma umdlalo udonsa. Uma amaqembu enabahlanganyeli abangaphezu koyedwa, cela ilungu elilodwa leqembu ngalinye ukuthi lidlale ngasikhathi sinye.
Susa izikhwama ebhodini ukuqala kabusha umdlalo. Ukuze ababambiqhaza bangakhathali ukudlala njalo emaqenjini afanayo, zama ukubashintshanisa.